Ungayilanda Kanjani Ividiyo ye-Instagram? I-Working Downloader (2020) - Komphakathi
I-Instagram ingenye yezinhlelo zokusebenza zokuxhumana zenhlalo ezithandwa kakhulu kwi-intanethi. Bathathe umhlaba ngesiphepho. Abasebenzisi abavela kuwo wonke umhlaba bajabulela izici eziyingqayizivele ezitholakala enkundleni yezokuxhumana. Ixhuma abantu ngokuthunyelwe, izindaba, nangama-reels asanda kwenziwa. Abasebenzisi bangakha futhi balayishe okuqukethwe okuningi esithangamini.
Kuyilutha kakhulu iningi lethu. Ikakhulu iba yinsizakalo yokwabelana ngamavidiyo. Abasebenzisi bangalanda kalula okuqukethwe kusayithi besebenzisa amapulatifomu ahlukile. Kulesi siqondisi, sizokukhombisa ukuthi ungalanda kanjani amavidiyo we-Instagram.
Ungalanda amavidiyo we-Instagram?
Abantu abaningi badidekile uma kungenzeka ukulanda okuqukethwe kusuka kuwebhusayithi ye-Instagram. Abasebenzisi bangabhekana nalezi zinkinga uma kukhulunywa ngokulanda amavidiyo. Uhlelo lokusebenza luhlonipha ubumfihlo bakho nabanye ngesikhathi esisodwa. Kungaba yinselele impela ukulanda amavidiyo kuma-akhawunti ayimfihlo. Kodwa-ke, kungenzeka ngosizo lwama-tweaks ambalwa. Ungagcina amavidiyo ocingweni noma kwi-PC yakho ngezindlela esizoxoxa ngazo. Kukhona amathani amawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza kwi-intanethi ezikusiza ngalesi sici. Lezi kulula kakhulu ukuzisebenzisa futhi azithathi isikhathi sakho esiningi.
Izindlela ezihamba phambili zokulanda ividiyo ye-Instagram:
Kulo mhlahlandlela, sizobheka izinketho ezinhle kakhulu ezitholakalayo kubafundi bethu. Sebenzisa lokhu ukuqala ukulanda okuqukethwe ku-akhawunti yakho ye-Instagram namuhla. Nazi izindlela ezahlukahlukene ezingasetshenziswa.
Kunamawebhusayithi ambalwa aku-inthanethi akusiza nge-Instagram video downloads. Lokhu kusebenza kahle kuwo wonke ama-akhawunti womphakathi. Sibheka izinyathelo zokulanda amavidiyo we-Instagram ngamawebhusayithi. Kulesi sigaba, sizosebenzisa ukulondolozwa okungathandeki okuvela kuwebhusayithi. Abasebenzisi bangalanda kalula okuqukethwe ngokulandela umhlahlandlela. Ngale ndlela, ungalandela izinyathelo ezingezansi ezinikezwe.
Vakashela i-Instagram -Abasebenzisi bangavakashela iwebhusayithi ye-Instagram kumadivayisi wabo we-PC. Kuyindlela elula yokuthola isixhumanisi kumavidiyo ofuna ukuwalanda. Manje isiyatholakala kumadivayisi weWindows ne-MacOS. Ungachofoza kokulandelayo isixhumanisi .Abasebenzisi bangangena futhi baqale ukusebenzisa izinsiza zabo ze-Instagram.
Ngena ngemvume -Abasebenzisi kufanele bangene ngemvume ku-akhawunti yabo ye-Instagram kuwebhusayithi. Ungasebenzisa igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi lapha ukufinyelela kalula. Abasebenzisi abasebenzisa i-Instagram web bazoba nezinhlobo zabo esezitholakele.
Sesha ividiyo -Lapho usungene ngemvume, kulula ukuthola okuqukethwe kokuphakelayo kwakho. I-Instagram igcwele amavidiyo ajabulisayo kulezi zinsuku. Sibheke amanye amavidiyo ahamba phambili ku-inthanethi emsamo. Abasebenzisi bangashesha ukuqala ividiyo bese bekopisha isixhumanisi sabo. Ngalesi sifundo, sibheke ividiyo ehlekisayo evela ekhasini elidumile le-9Gag Instagram.
Vakashela ugcine kusuka -Iwebhusayithi yokulondolozwa igcwele izinzuzo ezihlukile. Ikulethela izici eziphawulekayo kunoma yikuphi ukulanda.Abasebenzisi bangalanda okuqukethwe cishe kuwo wonke amawebhusayithi.Ungakopisha unamathisele isixhumanisi kusuka kumawebhusayithi ahlukile. Isebenza futhi nge-Instagram.Sebenzisa lokhu ukuthola izinzuzo ezinhle kakhulu ekulandweni kwakho. Chofoza inkinobho yokulanda ukuthola ividiyo yakho ye-HD.
Voila! Ungalanda kalula amavidiyo omphakathi ngale ndlela enhle. Izosebenza cishe yonke i-akhawunti kwi-intanethi.
Lesi sigaba sizobheka izinketho ezinhle kakhulu ezitholakala kithi ngamafoni ethu. Ungalanda futhi namavidiyo we-Instagram ngqo kwi-smartphone yakho. Kuyindlela efanelekile kubanikazi bedivayisi ye-Android. Ungaqala le ndlela ngokushesha. Uhlelo lokusebenza esizolisebenzisa lwaziwa njengeTubemate. Kuyinto isicelo esilula esizokusiza ngokuphuma kakhulu. Nazi izinyathelo zendlela yokulanda amavidiyo we-Instagram ngaleli sayithi.
Abasebenzisi kufanele baqale ukulanda kweTubemate ngokushesha ngesixhumanisi sabo esisemthethweni. Ayitholakali esitolo se-google play. Abasebenzisi bangasebenzisa izitolo zohlelo lokusebenza oluvela eceleni njenge-Uptodown.
Ungavakashela iwebhusayithi ye-TubeMate. Inazo zonke izixhumanisi zokulanda zepulatifomu ye-Tubemate ye-Android.Izokuqondisa kabusha enguqulweni yakamuva yohlelo lokusebenza.
Lapho usulanda futhi wafaka ifayela le-Tubemate APK kudivayisi yakho ye-Android, kulula ukuqala nge-Instagram. Kuyisiteji esaziwa ngokulandwa kwamavidiyo we-Youtube ku-inthanethi. Kungasiza futhi ku-Instagram nakwezinye izinhlelo zokusebenza zokuxhumana.
Abasebenzisi kufanele bangene ku-Instagram endaweni yesikhulumi. Kuphephe ngokuphelele, futhi i-ID yakho ne-password yakho izovikelwa. Insizakalo ye-tubemate isebenzisa isiphequluli sewebhu esiguqulwe ngaphakathi nohlelo ukulanda okulula. Sesha ividiyo ofuna ukuyilanda endaweni yesikhulumi.
Ungasesha ividiyo emsamo bese uyilayisha ngokushesha. Abasebenzisi bangasebenzisa ipulatifomu ukulondoloza kalula okuqukethwe.Abasebenzisi banganquma ikhwalithi yevidiyo ngokusebenzisa izilungiselelo. Yipulatifomu yokulanda esheshayo.
Siyethemba ukuthi indlela ye-tubemate iphumelela kakhulu kuzidingo zakho zokulanda. Kuyinzuzo kakhulu kubasebenzisi abafuna ukuthola okulandwayo kwi-akhawunti yangasese futhi.
Kunezinye izinketho ezimbalwa ezitholakalayo kwi-intanethi. Ungazisebenzisa lezi ukuthola ezinye izinzuzo zokulanda ezinhle. Nazi ezinye izinketho zokulanda ividiyo ye-Instagram. Ungazisebenzisa ukuqala ukonga okuqukethwe kwakho ngekhwalithi ye-HD ngokushesha.
I-Ingrammer iyithuluzi elisebenza online elisebenza kakhulu ezidingweni zakho. Ingalanda noma iyiphi ividiyo ngesixhumanisi esilula. Abasebenzisi bangabona izinzuzo ezinkulu ngale nkundla.
Iwebhusayithi inakho konke ngezidingo zakho ze-Instagram. Kuyinto ngempumelelo kakhulu ukulanda amavidiyo kusuka isicelo. Abasebenzisi bangavakashela isixhumanisi esilandelayo -https://ingramer.com/tools/instagram-video-downloader/. Kuzokusa kuwebhusayithi ye-Ingrammer ukuze usebenzise kalula. Sincoma ukuthi uzame ukuzama ukuthuthukisa okuqukethwe kwakho.
2.Ukulandwa kwevidiyo kwe-Instagram
Uhlelo lokusebenza oluyingqayizivele olusebenza kakhulu ekulandweni kwamavidiyo we-Instagram. Abasebenzisi bangasebenzisa le nkundla ukuze bayisebenzise kalula. Itholakala kubasebenzisi be-android. Ukulanda okulula kusuka kuwebhusayithi yabo emsulwa kuyadingeka. Ungavakashela lesi sixhumanisi -https://bit.ly/3mcgwvg.
Landa amavidiyo we-Instagram kalula ngokulandela umhlahlandlela wethu olula. Noma ngubani angalandela izinyathelo ezinikezwe lapha ukugcina okuqukethwe kumafoni noma kukhompyutha yakhe ngempumelelo. Siyethemba ukuthi i-athikili yethu ibisizakala ngezidingo zakho.
Amasayithi wamahhala we-Movie Download 2020